Mareykanka oo sheegay inuu soo celinayo amniga Soomaaliya
Kaaliyaha xogahayaha arimaha Africa mareekanka u qaabilsan Johhinie carson oo warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Marekanka ay ka Goantahay sidii ay ka ga qeyb qaadan lahaayeen xasiloonoi buuxda oo lagu soo dabaalo Soomaaliya.
Mr Johhinie carson ayaa dhanka kale shaaciyay inay xasiloonida Soomaaliya ay ku xirin tahay in la sii kordhiyo dagaalada lagula Jiro Xarakadda Al-Shabaab iyo waxa uu ugu yeeray Al-qaacida.
Waxaa inga goan in aan Soomaaaliya kala qeyb qaadano in nabada iyo kala danbeen ay ka hir gasho taana lagu gaari karo in lasii kordhiyo dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Al-qaacidasidaasi waxaa yiri Mr Johhinie carson.
Kaaliyaha xogahayaha arimaha Africa mareekanka u qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in hada ay wiiqantay awoodii Al Shabaab loona baahan yahay in dalka lagu soo celiyo amni iyo kala dambeyn taasi oo uu sheegay in Maraykanka uu gacan ka gaysan doono.
Caalamka ayaa indhaha ku haya dalka Soomaaliya oo ay ka socdaan isbadalo aad u waa weyn oo dib loogu soo celinayo dowladnimada Soomaaliya iyadoo Maraykanka uu ka mid ah yahay dalalka sida weyn u taageeraya Soomaaliya.